I-FAQs -Shijiazhuang V-sheng Trading Co., Ltd.
Ixabiso linokuthethathethana, kwaye lahlengahlengiswa ngokobungakanani okanye isimbo okanye iinkcukacha okanye iphakheji. Xa uthumela umbuzo okanye isicelo, nceda usazise iinkcukacha kangangoko kunokwenzeka.
Ixabiso liya kuba phantsi kotshintsho kuxhomekeke kwiindleko zelaphu / izinto kunye nezinto kunye nezinto zemali etd. Ewe kunjalo, siya kukuthumelela uluhlu lwamaxabiso ngqo emva kokuba inkampani yakho inxibelelana nathi ngolwazi oluthe kratya.
Ngokwesiqhelo ixabiso lesampulu lisimahla ukuba ufuna isiqwenga esinye,
Kodwa iindleko zokuhambisa ngokucacileyo ziya kuqokelelwa nguwe.
Ukuba ufuna iisampulu zabathengisi, ke le ntlawulo iza kuhlawulwa nguwe kwangaphambili, kunjalo singabuyisa i-50% kuwe xa ufaka iodolo (isixa siya kuba ngaphezulu kwe-Usd20,000.00, kwangaxeshanye iindleko zokuhambisa ngokucacileyo ziya kuqokelelwa nguwe.
Ngokwesiqhelo sinokwamkela ii-500Pcs ngombala / ngesimbo ngasinye, kodwa zininzi iintlobo ezahlukeneyo zeemveliso, ke ngoko ubuncinci be-odolo yobungakanani kufuneka kugqitywe ngokweemveliso ngathi.
Ewe, ubukhulu becala ishishini lethu le-OEM ngoku, ukuze ukwazi ukuthumela uyilo lwakho lwemveliso kunye ne-LOGO, emva koko ngumsebenzi wethu kwaye ukhululekile okanye iqela lethu loyilo liya kukunceda kuyilo njengombono wakho.
QC = Ulawulo lomgangatho, sineqela lethu lobungcali lokulawula umgangatho kwinkampani yethu, kukho abantu aba-5-6 abahlukeneyo abasebenza ngemveliso / iimveliso ezahlukeneyo omnye nomnye, kananjalo baya kwenza intlanganiso elula / emfutshane yokuhlola rhoqo ngokuhlwa ukuze baxoxe ngento abayifumeneyo. ingxaki ngexesha lokuvelisa kunye nendlela abayifumana ngayo indlela yokuhlala, ewe baya kuthumela i-ajenda yokuhlangana kwinkampani ukuba ijonge nayo ukuze ukuthengisa bazi zonke iinkcukacha kumzi-mveliso.
Ngokwesiqhelo siya kwenza uhlolo lwexesha ezintathu ezahlukeneyo:
Ukuhlolwa kwangaphambili kuya kwenziwa ekuqaleni kwemveliso ukuqinisekisa ukuba umbala / ubungakanani / isitayile sichanekile.
Ukuhlolwa okuphakathi kuya kwenziwa ngexesha lokuvelisa ukuqinisekisa ukuba umbala / ubungakanani / isitayile / izixhobo / ushicilelo / ukuhonjiswa / ileyibhile njl.
Ukuhlolwa kokuphela kuya kwenziwa ngaphambi kokuthunyelwa ukuze kuqinisekiswe ukuba konke kuchanekile ngokupakisha kunye nokulayisha isikhongozeli.
Sinenkqubo esemgangathweni ye-ISO9001, i-Oeko-Tex 100, i-BSCI, i-GRS, i-GOT, iziqinisekiso ze-FSC.
Ngokwesiqhelo siya kusebenzisa amagama amabini ahlukeneyo entlawulo nge-30% yedipozithi kwangaphambili, i-70% eseleyo ngokuchasene nekopi ye-B / L ngu-TT okanye uLC ekuboneni.